Zvikoro Zvakachengeteka- Hurumende Zvikoro zveKosi Chinyorwa - FOI Chikumbiro. | KUSVIRA
Zvikoro Zvakachengeteka- Zvikoro zveHurumende Zvikoro Zvemukati - FOI Chikumbiro.
MuOct 2018 CAUSE (Coalition Pamusoro pePfungwa Isina Kuchengetedzwa Dzebonde) yakatumira Rusununguko rweRuzivo chikumbiro uye ichibva yawana mhinduro kubva kuSecurity Schools Coalition nezvezvirimo muzvirongwa zveSchool Safe program zviri kuitiswa muVictorian zvikoro, Australia.
CAUSE, kuburikidza negweta Sharrock Pitman Kwemutemo, vakaisa zviri mukati metsamba pazasi pane Safe Schools Coalition webhusaiti uye vakagamuchira email ine mhinduro inoenderana yakatumirwa yeruzivo rwemuverengi. (RUDZAI UYE KUTI CHEMA ROKUTI ROPA HAPANA KUSHURE KUSHANDA.)
Rusununguko rweRuzivo Chikumbiro kune Yakachengeteka Zvikoro Coalition.
Kana iwe uchida kuverenga yekutanga Chikumbiro cheRuzivo chikumbiro mumutauro wako ndapota tora pasi pdf. Unogona kushandisa shanduri yepdf yepamhepo kushandura iyo pdf mumutauro wako. Muturikiri woMutauro anogona kuwanikwa pano: - https://www.onlinedoctranslator.com/
Rusununguko rweRuzivo Kupindura kune Zvakachengeteka Zvikoro Zvikumbiro. DZIVA FOI 2018-329
Vanodiwa Mr. Sparrius
Ndatenda nemhinduro dzenyu dzichangobva kuitika.
Isu tinobvuma chikumbiro chako kuti udzore zvekare kunongedza 7 yechikumbiro chako cheFOI, uchichinjisa kuchiri:
7 Zvese zvinokurudzirwa vadzidzisi zviwanikwa pasi peiyo HPE kharukure, hutano hwepabonde, kudheerera uye dzidzo yepabonde. Izvi zvinosanganisira zvese zvakurudzirwa uye kukosheswa mapato echitatu anosanganisira kwete asi ari mashoma, Minus18, Project Rockit, "Beyond That So Gay" - Daniel Witthaus, vese Ansell DzeBonde-Ed. Kits zvine chekuita neLa Trobe University.
Nezve chikamu chekutanga cheiyi pfungwa yezvikumbiro zvako ('Zvese zvinokurudzirwa mudzidzisi zviwanikwa pasi pehukamu hweHPE, hutano hwepabonde, kudheerera uye dzidzo yepabonde '), ndokumbira unzwe kuti magwaro anowanikwa pachena.
Mahara akakosha anongedzo ane chekuita nechikamu ichi chekukumbira akadai: (DZVANYA UCHIITA KUTI HERE KUSVIRA PASI PASI PASI PANO BASA RINOGONA.)
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/buildingresilience.aspx (zviwanikwa zviri pasi pe 'Dzidzisa' tab)
Uye zvakare, Dhipatimendi reDzidzo uye Kudzidzisa (iro Dhipatimendi) rinokurudzira kune zvimwe zvikoro “Zvese Isu” zviwanikwa izvo zvisiri kuwanikwa paFUSE kana webhusaiti yeDhipatimendi. Inowanikwa pane ino webhusaiti pasi pe "Yakachengeteka Zvikoro Zvirongwa" tab. Kana > tinya apa <
Ndokumbirawo kutaurwa kuti hapana chimwe chezvinhu izvi zvinogoneswa. Dzakasarudzika kuti zvikoro zvishandise, uye vadzidzisi vanoshandisa kutonga kwavo kwakanaka pakusarudza uye nekushandisa zviwanikwa zvinoenderana nechikoro chavo uye nevadzidzi vavo.
Nezve chikamu chechipiri chepfungwa 7 yechikumbiro chako ('vese vakurudzira uye kukwezva vechitatu mapato mapato kusanganisira asi asina kugumira kuna, Minus18, Project Rockit, "Beyond That So Gay" - Daniel Witthaus, vese Ansell DzeBonde-Ed. Kits zvine chekuita neLa Trobe University '), ndokumbira unzwe kuti iwe unofanirwa kubata masangano aya zvakananga kune chero zviwanikwa zvine chekuita nemasangano aya.
Isu tinoshuvawo kukupa mazano ezvitanhatu zvekutanga zvechikumbiro chako, kunge uri:
1 Zvese zvinoshandiswa zvine chekuita nechirongwa che 'Zvikoro Zvakachengeteka' chakagadziriswa neDhipatimendi reDzidzo uye Kudzidzisa kwegore rega rega mukati mezvikoro zvePuraimari, kunyatsoita senge chikamu chechirongwa che 'Zvikoro Zvakachengeteka' kana mukati memamwe matunhu ekharikhulamu.
2 Zvese zvinoshandiswa zvine chekuita nechirongwa che 'Zvikoro Zvakachengeteka' chakagadziriswa neDhipatimendi reDzidzo uye Kudzidzisa kwegore rega rega mukati meChikoro cheSekondari, ingave ichiratidzika sechikamu chechirongwa che'Chikoro Chakachengeteka 'kana mukati menedzimwe nzvimbo dzedzidzo.
3 Zvese zvekuraira zvinyorwa uye mirairo ine chekuita neiyo 'Zvikoro Zvakachengeteka' iyo yakapihwa vadzidzisi kune ese ari maviri Chikoro chePrayimari uye Chikoro cheSekondari. Izvi zvekudzidzisa zvinyorwa zvinosanganisira zvinyorwa zvese zvinogadziriswa uye zvakagadzirwa neDhipatimendi reDzidzo uye Kudzidzisa uye / kana vechitatu mapato.
4 chero mabhuku ebhuku evadzidzi akagadzirwa, kubudiswa, kugoverwa kana kushandiswa maererano nehurongwa hwe 'Zvikoro Zvakachengeteka' kune ese Chikoro chepuraimari uye eSekondari.
5 Chero internet internet URL kana makodhi anowanikwa ayo anopihwa kuvadzidzisi uye / kana vadzidzi kuti vabatane nezvinhu zvinoenderana neiyo 'Zvikoro Zvakachengeteka', zvingaitwe neDhipatimendi reDzidzo uye Kodzidzisa kana nevechitatu mapato, kune ese ari Chikoro uye Chikoro cheSekondari. .
6 Chero humbowo, hwese hukaringana uye huwandu muzvisikwa, iyo iri muDhipatimendi reDzidzo uye Dzidzo, iyo inoratidza chero kuwirirana (kungave kwakanaka kana kwakashata) pakati peiyo 'Zvikoro Zvakachengeteka' nechirongwa chekudzidza kwevadzidzi. Izvi zvinosanganisira humbowo hwakawanikwa hukama neZvikuru zvekutanga uye Chikoro cheSekondari.
Iyo FOI Unit yakaita kuti kutsvakwa kuitwe kunozivisa magwaro nenzvimbo yakakodzera yeDhipatimendi. Isu takaona kuti hapana magwaro aripo anoenderana neechimwe cheizvi zvitanhatu zvezvikumbiro zvako.
Sezvo pasina magwaro aripo emapoinzi 1 kuenda ku6, uye sezvo zvinyorwa zviripo pachena kune point 7, kugadzirisa kwechikumbiro chako cheFOI kwapera.
Rusununguko rweIzivo Ruzivo
Dhipatimendi Rezvidzidzo uye Kudzidziswa
2 Treasure Nzvimbo, East Melbourne VIC 3002